Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်)
Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Triherpine ကိုများသောအားဖြင့် မျက်စ်ိရောယုန်ရောဂါများကို ကုရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
ရေယုန်သည် ကိုယ်ထဲတွင် တိတ်တဆိတ် အောင်းနေတတ်ပြီး ရောဂါဖြစ်စေသော အကြောင်းများ ကြုံလာမှသာ ထဖြစ်တတ်သော ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
ရေယုန်ရောဂါကို အမြစ်ပြတ်အောင် မကုနိုင်သော်လည်း နာကျင်မှုများ၊ မျက်လုံး ရောင်ရမ်းခြင်းများကို သက်သာစေရန်နှင့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ (ဥပမာ- မျက်စိကွယ်ခြင်း)ကို နည်းစေရန် အတွက် ကုသနိုင်ပါသည်။
Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်) ဘယ်လိုသုံးသင့်သလဲ
triherpine (trifluridine) မျက်စဉ်းဆေးကို အသုံးမပြုမီ လက်နှစ်ဖက်ကို သေချာစွာဆေးပါ။ ခေါင်းကို အနောက်ဖက်သို့ လှန်ထားပါ။ သင့်လက်ညှိုးဖြင့် အောက်မျက်ခမ်းကို ဆွဲချပါ။ ထို့နောက် အောက်ဖက် မျက်အိတ်အတွင်းသို့ ဆေးကို အစက်ချပါ။
အောက်ဘက်ကို ခေါင်းစိုက်ပြီး မျက်လုံးများကို ၁ – ၂ မိနစ်ခန့်ပိတ်ထားပါ။ ထို့နောက် အပြင်ဘက်မှနေပြီး သင့်လက်ချောင်းဖြင့် မျက်လုံးကို အပြင်ဘက်မှ ဖိပြီးမျက်ခွံအတွင်းပိုင်းသို့ ၁- ၂မိနစ်ခန့်တွန်းထားပါ။ မျက်တောင်မခတ်ပါနှင့်။ အခြားမျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုလည်း ဖော်ပြပါ အဆင့်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
မျက်စဉ်းဆေးဗူးကို ရေဖြင့်မဆေးဘဲ အဖုံးကို ပြန်ပိတ်ပါ။
၁% triherpine မျက်စဉ်းဆေးကို မျက်ကြည်လွှာပေါ်သို့ ၁စက်၊ ၂ နာရီခြားခတ်ပါ။ မျက်ကြည်လွှာ အပေါ်ယံသားတက်လာသည်အထိ တနေ့လျှင် အများဆုံး ၉ စက် ခတ်နိုင်ပါသည်။
ထို့နောက် တနေ့လျှင် ၄ နာရီခြား ၁ စက်စီကို ၇ရက် ခတ်ပါ။ အနည်းဆုံး တနေ့ကို ၅ ကြိမ်ခတ်ရမည်။
၇ရက် အသုံးပြုပြီး သည့်တိုင် မသက်သာလာပါက နောက်ထပ် ၁၄ ရက်အသုံးပြုနိုင်သလို အခြားသော ဆေးများဖြင့်လည်း ကုသနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ အခြားသော မျက်စိဆေးများ၊ လိမ်းဆေးများကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက မျက်စဉ်းဆေးကို အရင်ခတ်ပြီး ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ် ခန့်ကြာပြီးမှ အသုံးပြုပါ။
ဆေးအာနိသင် ပြည့်ဝစွာရရှိရန် ဆေးကို အချိန်မှန်မှန်သုံးပါ။ ဆေးပတ်ပြည့်သည်အထိ သုံးခြင်းက ဆေးယဉ်ပါးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
သို့သော် ၁% triherpine ကို ၂၁ ရက်ဆက်တိုက်အသုံးပြုခြင်းသည် မျက်လုံးကို အဆိပ်ဖြစ်စေသည့်အတွက် ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါသည်။
ဆေးကို ၇ရက် အသုံးပြုပြီးသည့်တိုင် မသက်သာပါက ၊ ပိုဆိုးလာပါက ဆရာဝန်အားပြောပြပါ။
သိလိုသည်များရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
triherpine ကို အခန်းအပူချိန် မှာသိမ်းပါ။တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ triherpine ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ triherpine ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
triherpine ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
triherpine ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါအချက်များနှင့် ကိုက်ညီလျှင် ဆေးမသောက်မီ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန် လိုအပ်သည်။
triherpine ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေလျှင်၊ ကလေးယူရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင်၊ ကလေးနို့တိုက်နေလျှင်
ညွှန်ကြားချက်ရှိသော/ မရှိသော ဆေးများ၊ တိုင်းရင်းဆေးများနှင့် ဖြည့်စွက်အာဟာရများ မှီဝဲနေလျှင်
အခြားသော ဆေး၊ အစားအစာများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
triherpine ကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်ထက် ပိုအသုံးပြုခြင်း မပြုရပါ။
ဆရာဝန်မညွှန်ကြားဘဲနှင့် triherpine ကိုအခြားသော မျက်စိဝေဒနာများအတွက် မသုံးသင့်ပါ။
ဆေးကိုရောဂါလက္ခဏာသက်သာသော်လည်း သတ်မှတ်ထားသော ရက်ရောက်သည်အထိအသုံးပြုရပါမည်။ အချိန်မတိုင်မီရပ်လိုက်ပါက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားများသည် ဆေးယဉ်ပါးသွားကာ နောင်အခါများတွင် ဆေးမတိုးခြင်းများဖြစ်တတ်ပါသည်။
အသက် ၆နှစ်အောက်ကလေးများတွင် triherpine ၏ စိတ်ချရမှုရှိမရှိမသိသေးသည့်အတွက် သတိနှင့် အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါဆိုးကျိုးများသည် အဖြစ်များသော ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့ကို ပြင်းထန်စွာ ခံစားနေရပါက ဆရာဝန်အား သွားပြပါ။
မျက်လုံးများ ခဏတာစပ်ခြင်း၊ စူးခြင်း
မျက်လုံးများ အရင်ထက်ပိုနာလာခြင်း၊ ပိုဆိုးလာခြင်း
မျက်လုံးများနီလာခြင်း၊ မျက်သားဖြူတွင် သွေးကြောများ မြင်ရခြင်း
မျက်လုံးများနှင့် မျက်ခွံများ ရောင်လာခြင်း
အမြင်အာရုံများ ပြောင်းလဲလာခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
triherpine (trifluridine)ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓာတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလား
triherpine (trifluridine)က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓာတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
triherpine (trifluridine)ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓာတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေအတွက် Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Triherpine (ထရိုင်ဟာပင်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
triherpine (trifluridine)ကို ၅ မီလီပါ မျက်စဉ်းဆေးရည် အနေနှင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
triherpine (trifluridine)ကို သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံး သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Trifluridine. https://www.drugs.com/pro/trifluridine.htmlAccessed December 18, 2016